Nweta Enyemaka Namgụ Azụmaahịa Gị na Squadhelp | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 11, 2019 Sunday, Jenụwarị 13, 2019 Douglas Karr
Chọrọ ịnụ akụkọ egwu na-atụ egwu? Companylọ ọrụ gị na-ezube ya igba egbe na invests $ 150,000 na ngalaba, aha, na igba egbe to naanị ya niile ịda mgbe ị na-amụta na ndị FBI nwere nnyocha nke otu aha na-aga n'ihu ọha… 3 EZE.
Ọ bụghị na [currentlylọ Ọrụ ugbu a na-enweghị aha] nwere ike ịme ihe ọ bụla iji kwupụta ụdị mbipụta ahụ. Otú ọ dị, ọ na-eju m anya n'ezie, na ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ndị na-adịghị eme ọtụtụ nlebara anya n'ịgụ aha ha. Amatala m ụlọ ọrụ ole na ole jiri nnukwu ego were ụlọ ọrụ ndị na-emepụta aha, wee chọpụta na aha ha nwere nkọwa pụtara ụwa niile, ma ọ bụ ọbụna n'ime ụlọ ọrụ ọzọ.
Otu ụlọ ọrụ mụ na ha rụụrụ ọrụ goro m ọrụ enyemaka. Nsogbu ozugbo m nwere bụ na akara ha na ụlọ ahịa dị na ntanetị na ụlọ ọrụ ọzọ. N'ihi ya, enwere ọgba aghara ozugbo na ndị mmadụ enweghị ike ịchọta ha n'ịntanetị… ọbụlagodi mgbe ị na-ede aha azụmahịa ha na nsonaazụ ọchụchọ.
Companylọ ọrụ ọzọ m nyeere aka nwere ike ịme nyocha Google iji chọpụta na aha ha dị nnọọ nso na saịtị na-ekwesịghị ekwesị. Ha ka na-eweta atụmanya ọhụụ nke na - enweghị ọ happyụ na ndị ọrụ ha pịnyere na URL na - ezighi ezi.
Ogwu bụ ahịa ebe ị ga - enweta enyemaka ịkọ aha azụmaahịa gị, ịchọta aha ngalaba dịnụ, yana ọbụlagodi inweta enyemaka iji mepụta akara ngosi gị. Ha edeela nnukwu ebook nke na-adọta gị site na usoro 8 maka ịkọ aha azụmahịa gị:
Gịnị bụ azụmahịa gị 'nzube?
Kedu ndị na-ege ntị na azụmahịa gị ga-abara uru?
Kedu ihe pụrụ iche maka azụmaahịa gị? Kedu ụdị onye ị bụ?
Nweta enyemaka site na ndị okike ndị ọzọ (nke ahụ bụ ọrụ ha) iji chepụta aha.
Tụfuo aha ndị na-enweghị isi.
Mee nyocha asụsụ iji hụ na aha gị adịghị agbagwoju anya ma ọ bụ na-ekwesịghị ekwesị n'asụsụ ndị ọzọ.
Zere ịbụ onye a gbara akwụkwọ maka nsogbu ụghalaahịa.
Nyochaa ya tupu ị dịrị ndụ!
Ogwu nwere otu okike nke na - enyere gị aka wepụta aha azụmaahịa pụrụ iche. Usoro ahụ kwụ ọtọ:
Bido asọmpi gị - Mezue ngwa ngwa ha, dị mfe ngwangwa dị nkenke, ha ga-ekenye ya ndị obodo anyị karịrị 70,000 Creatives.
Echiche amalite ịwụbata - You ga - ebido ịnata echiche aha - nke emepụtara maka gị - n’ime nkeji. Ọtụtụ ndị na-asọ mpi na-arụrụ gị ọrụ n'otu oge! Asọmpi ịkọ aha na-enweta ọtụtụ narị aha echiche. A na-enyocha echiche niile na akpaghị aka maka nnweta URL.
Rụkọta ọrụ ma Na-ekwurịta Okwu - Hụ ntinye gị niile na dashboard gị. Ntinye ọnụego, hapụ ihe nzuzo, ma zipụ ozi ọha na eze, na-eduga usoro ahụ na aha zuru oke.
Emere nkwado - Họrọ obi ike na aha gị. Usoro nkwado anyị pụrụ iche gụnyere nyocha ngalaba, nyocha njirimara ụghalaahịa, nyocha asụsụ, yana ule ndị ọkachamara na-ege ntị.
Buru onye mmeri gi! - Ozugbo asọmpi gị kwụsịrị, kpọsaa onye mmeri - ma denye aha ahụ. I nwedịrị ike ịlaghachi na Squadhelp iji malite Logo Design ma ọ bụ Tagline oru ngo maka aha gị.
Ẹkedori a Naming Kọntestị Lelee ahịa ha
Ngosipụta: Ana m eji nke anyị njikọ njikọta maka Squadhelp na post a.
Tags: tinye ahia giakpọ aha azụmahịa gị